I-Paragliding Rokytnice nad Jizerou Lysa hora
ILysahora (Kahleberg ngesiJalimane) iyindawo ephakeme etholakala eCzech Ridge, eziNtabeni zaseGiant. Ukuphakama kwentaba kungamamitha ayi-1344. Ukusuka eRokytnice nad Jizerou kune-chairlift efinyelela ku-1310 m, lapho kukhona khona isiteshi sayo esiphezulu. Indlela yethebula ivulwa kuphela ebusika. Ngokubonakala okuhle kakhulu iLysá Hora kanye nogquma lwezintaba zeGiant kungabonakala kusuka ePrague kusuka ebangeni elingamakhilomitha angama-120. ILysahora itholakala cishe ngamakhilomitha amane empumalanga esenyakatho ne mpumalanga yeRokytnice nad Jizerou. Yintaba ye-cumulus enesiqongo esiphakeme esilele entshonalanga phakathi kwePlešivec peak kanye nentaba yeKotel ohlangothini olusempumalanga. Phezulu, lapho iphuzu le-geodetic limiswe khona, kumbozwe ngesihlahla sesihlahla esinokucaciswa ngezikhathi ezithile, lapho izimbabazi zedada nezimila zezimbali ezingandile zisakazeka khona. Ezindaweni eziphansi ezikhula emahlathini ahlanzekile agcinwe kahle. Njengoba kungekho ndlela ebekiwe yokuqwala intaba enqamula phezulu kwentaba futhi isendaweni eyi-4 yeziNtaba zaseKrkonoše, ukufinyelela kuyo kuyenqatshelwe. Ingqungquthela ingafinyelelwa ebusika ngemoto ekhebula, kusuka esiteshini sengqungquthela itholakala ngamamitha angama-200 empumalanga. Ngaphesheya kwempumalanga yesiteshi esiphezulu se-chairlift kukhona umzila wokuwela izwe ubusika onomugqa webar.
I-Paragliding ngumdlalo wezindiza ngokuya ngemithetho yezindiza zomphakathi. Iphiko le-paragliding - i-paraglider, eliwela esigabeni semishini yezindiza ezindizayo ngaphansi kokuphathwa kwe-LAA ČR, isetshenziselwa ukuhamba emoyeni. Kuqala kusuka egqumeni ngokuqala noma kusuka endizeni usebenzisa ithuluzi lokuphonsa ithawula. Umshayeli ongumshayeli onolwazi angabhebhetheka ngokusebenzisa imisinga yomoya ekhuphukayo. Imisinga ekhuphukayo ingaba "ngomshini" lapho ukuhamba komoya kukhuphuka ngesithiyo sendawo (umthambeka), noma ukushisa lapho umoya oshisayo usuka ebusweni bomhlaba ukhuphukela phezulu (ama-thermals).
U-Horní Domky funicular ukundiza Lysa hora i-paragliding Rokytnice iqhwa ebusika
Amathegi: U-Horní Domky funicular ukundiza Lysa hora i-paragliding Rokytnice iqhwa ebusika
Indawo: ILysahora, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, Czech Republic